Inona ny Pip amin'ny Forex - Fantaro ny rehetra momba ny Pips amin'ny Varotra Forex
fanabeazana - Lahatsoratra & torolalana - forex basics articles - Inona ny Pip amin'ny Forex?
Raha liana amin'ny forex ianao ary mamaky lahatsoratra momba ny analytical sy vaovao, mety ho tonga amin'ny fehezan-teny na pip. Izany dia satria ny pip dia fomba mahazatra amin'ny fifanakalozana ara-barotra forex. Fa inona ny pipis sy point any amin'ny Forex?
Amin'ity lahatsoratra ity dia hamaly ny fanontaniana hoe misy inona ny Pip ao amin'ny tsenam-bola forex ary ny fomba fampiasana io hevitra io Forex varotra. Ka mba vakio fotsiny io lahatsoratra io raha te hahalala hoe inona ny pips amin'ny forex.
Inona avy ny pips amin'ny Forex Trading?
Ny Pips dia fiovana kely amin'ny fihetsiky ny vidiny. Tsotra ihany, ity no unit mahazatra amin'ny fandrefesana ny vidin'ny fifanakalozana fifanakalozana.
Tamin'ny voalohany, ny pip dia nampiseho ny fiovana kely indrindra amin'ny fihenan'ny vidin'ny Forex. Na dia, noho ny fahatongavan'ny fomba fiasa bebe kokoa aza dia tsy misy ifandraisany intsony io famaritana voalohany io. Amin'ny fomba nentim-paharazana, ny vidin'ny Forex dia notsongaina ho amin'ny toerana efatra farany. Tamin'ny voalohany, ny fiovan'ny fividianana ambany indrindra amin'ny vidin'ny fizarana fahefatra dia nantsoina hoe paipa.
Mijanona ho sanda manara-penitra ho an'ireo brokers rehetra ary sehatra, izay mahatonga azy ho tena ilaina ho fepetra iray ahafahan'ny mpivarotra mifampiresaka nefa tsy misy fisafotofotoana. Raha tsy misy famaritana voafaritra toy izany, dia misy risika fampitahàna tsy mety raha tsy amin'ny teny mahazatra toa ny point na ticks.
Ohatrinona ny Pip amin'ny Forex?
Mpivarotra maro no manontany ity fanontaniana manaraka ity:
Ohatrinona ny pipy iray ary ahoana no hanisaany azy marina?
Ho an'ny ankamaroany vola tsiroaroa, fantsom-pifandraisana iray dia ny hetsika ny toeran'ny laharana fahefatra. Ny fanamarinana lehibe indrindra dia ny mpivarotra forex mifandray amin'ny Yen Japoney. Ho an'ny mpivady JPY, ny pipy iray dia ny hetsika amin'ny toerana famaranana faharoa.
Ity tabilao manaraka ity dia mampiseho ny sanda forex momba ny mpivarotra sandam-bola mahazatra mba hahatakatra izay mitovy amin'ny Forex:
Ny vidin'ny pip forex (1 lot)
Ny fampitahana ny sandan'ny paipa forex mpivady
Amin'ny alàlan'ny fanovana ny fantsom-bolo iray amin'ny toeranao, afaka mamaly ny fanontaniana hoe ohatrinona ny vidin'ny Pip. Andeha hatao hoe te-manakalo EUR / USD ianao, ary manapa-kevitra ny hividy vola iray ianao. Mitentina 100,000 Euros ny iray iray. Ny iray kilao dia 0.0001 ho an'ny EUR / USD.
Araka izany, ny 100,000 vidin'ny fantson'ny iray ho an'ny iray dia 0.0001 10 x XNUMX = XNUMX Dolara Amerikana XNUMX.
Aoka hatao hoe mividy EUR / USD amin'ny 1.12250 ianao ary avy eo akatona ny toerana misy anao amin'ny 1.12260. Ny tsy fitovian'izy roa ireo:
Izany hoe, ny fahasamihafana dia fantsara iray. Noho izany, hanao $ 10 ianao.
Inona no fifanarahana Forex?
Andao atao hoe manokatra ny toeranao amin'ny EUR / USD amin'ny 1.11550. Midika izany fa nividy fifanarahana iray ianao. Ity vidin'ny fividianana fifanarahana iray ity dia 100,000 Euros. Mivarotra ianao Hividianana saribola hividy Euros. Ny lanjan'ny Ny dolara amaranao dia hita taratra amin'ny ankapobeny ny fifanakalozana.
Nakatanao ny toerana nomenao tamin'ny fivarotana fifanarahana iray tamin'ny 1.11600. Mazava fa mivarotra Euros ianao ary mividy Dollars.
Midika izany fa tany am-boalohany namidy $ 111,550 ary farany nahazo $ 111,560 ho tombony amin'ny $ 10. Avy amin'ireto, hitantsika fa ny fantsona iray mankasitraka anao dia nahatonga ny $ 10 anao.
Ity lanjan'ny pips dia mifanandrify amin'ny mpifaninana forex rehetra izay voatonona hatramin'ny toerana desim-paritra.
Ahoana ny momba ny vola tsy voatonona hatramin'ny toerana efatra faritana farany?
Ny japoney Yen dia Japoney Yen. Ny mpivady vola mifandraika amin'ny Yen dia voamariky ny toerana roa farany, ary ny pips forex ho an'ny mpivady toy izany dia fehezin'ny toerana famaranana faharoa. Noho izany, andeha hojerentsika ny fomba kajy ny pips amin'ny USD / JPY.
Raha mivarotra iray amin'ny vidin'ny USD / JPY ianao, ny vidin'ny iray amin'ny vidiny iray dia mitentina 1,000. Andao hijery ohatra iray hahalala isika.
Andao atao hoe mivarotra ianao roa an'ny USD / JPY amin'ny vidin'ny 112.600. Iray amin'ireo USD / JPY dia 100,000 Dolara Amerikana. Noho izany, amidy 2 x 100,000 Dolara Amerikana = Dolara Amerikana 200,000 ianao hividy 2 x 100,000 x 112.600 = 22,520,000 Yen Japoney.
Mihetsika aminao ny vidiny ary manapa-kevitra ianao fa mampihena ny fatiantoka. Manidy amin'ny 113.000 ianao. Ny fantsona iray ho an'ny USD / JPY dia ny hetsika amin'ny toerana famaranana faharoa. Nihetsika ny vidiny 0.40 hanoherana anao, izay 40 litatra.
Nakatanao ny toerana misy anao tamin'ny fividianana roa amerikana / JPY tamin'ny 113.000. Mba hanavotana $ 200,000 amin'ity tahan'ny ity, mila 2 x 100,000 x 113.000 = 22,600,000 Yen Yen Japoney.
100,000 Yen izany mihoatra ny nivarotanao voalohany ny Dolara, ka manana deficit 100,000 Yen ianao.
Ny fahaverezan'ny 100,000 Yen ao anatin'ny 40 pips dia midika fa very 80,000 / 40 = 2,000 Yen isaky ny fantsona ianao. Koa satria nivarotra roa ianao, dia io Yen io dia 1000 Yen isaky ny iray.
Raha averina amin'ny vola hafa ankoatry ny vola nindramina ny kaontinao, dia hisy fiantraikany amin'ny sandan'ny fantsom-bola izany. Afaka mampiasa na inona na inona ianao kajy ny sandan'ny pip an-tserasera mba hamaritana haingana ny sanda fika an'ny tena.
Ahoana ny fampiasana pips amin'ny fifanakalozana Forex?
Misy ny milaza fa ny teny "pips" tany am-boalohany dia midika hoe "Isan-jato-In-Point, "saingy mety ho fisehoan-javatra diso izany.
Inona ny fantsona amin'ny forex? Na inona na inona fiaviany tamin'io teny io, ny pips dia mamela ny mpivarotra vola hiresaka momba ny fiovana kely amin'ny vidin'ny fifanakalozana. Izany dia mitovy amin'ny fomba nanamorana ny teny hoe base point (na bip) ny fanamorana ny fiovana kely amin'ny zana-bola. Mora kokoa ny milaza fa nisondrotra ny tariby, ohatra, tamin'ny isa 50, fa tsy hoe holazaina fa niakatra 0.0050.
Andao hojerentsika ny fomba hisehoan'ny vidin'ny forex MetaTrader mba hamelabelarana fantsona amin'ny forex indray. Ny tarehimarika eto ambany dia mampiseho ny efijery fandaharana ho an'ny AUD / USD ao amin'ny MetaTrader:
Ny teny notondroina tao amin'ny sary dia 0.69594 / 0.69608. Azontsika jerena fa ny tarehimarika amin'ny toerana famaranana farany dia kely noho ny isa hafa. Midika izany fa ampahany kely amin'ny fantsara ity. Ny tsy itovizany eo anelanelan'ny vidin'ny bidin sy ny vidin'ny tolotra dia 1.4 pips. Raha nividy sy nividy teo no ho eo ianao, dia ho 1.8 XNUMX ny vidin'ny fifanarahana.
Ny fahasamihafana eo amin'ny pips sy ny isa
Raha mijery ny sary eo ambanin'ny varavarankely hafa ianao dia ahita "Hanova ny fandaharana"varavarankely:
Mariho fa amin'ny ampahany amin'ny Hanova ny fandaharana varavarankely, misy ny menaka midina mety ahafahanao misafidy teboka sasantsasany ho toy ny fiatoana fatiantoka na haka tombony. Noho izany, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny teboka sy ny pips. Ireo teboka ao amin'ireo lisitra mitete ireo dia manondro ny toerana fahadimy farany. Raha atao teny hafa, ny kesika fractional mandrafitra ampahafolon'ny lanjan'ny paipa iray. Raha misafidy ianao 50 isa eto, ho tena marina ianao mifidy 5 pips.
Fomba iray tena tsara hahafantaranao ny vidinao amin'ny vidin'ny forex Mampiasà kaonty demo ao amin'ny Sehatra MetaTrader. Io dia ahafahanao mijery sy mifanakalo varotra amin'ny vidin'ny tsena miaraka amin'ny loza tsy misy fatiantoka satria mampiasa vola virtoaly amin'ny kaonty demo ianao.
Raha liana amin'ny varotra ara-barotra ianao, dia mety hanontany tena ianao raha misy zavatra toy ny pip amin'ny mpivarotra stock. Eny tokoa, tsy misy fampiasana pips raha resaka fifanakalozana varotra, satria efa misy fepetra efa natokana hanovana ny fiovan'ny vidiny toy ny penina sy ny cents.
Ohatra, ny sary eto ambany dia mampiseho baiko ho an'ny stock Apple:
Ny isa integer ao amin'ny teny voalaza dia maneho ny vidin'ny Dolara Amerikana, ary ny isa laharana famaranana dia maneho isanjato. Ny sary etsy ambony dia mampiseho fa ny sandan'ny ny varotra dia 8 cents. Mora azo ny teny, ka tsy ilaina ny mampiditra teny hafa toy ny katsaka. Na dia indraindray ny jargon-tsena indraindray dia mety misy ny fehezan-teny ankapobeny toy ny "tend" mba hisolo ny hetsika ny fiovan'ny kely indrindra amin'ny vidin'ny mitovy sanda.
The lanjan'ny fantsona iray amin'ny indise sy ny entana dia mety miovaova. Ohatra, ny fifanarahana volamena sy menaka moto na DXY dia mety tsy mitovy amin'ny tranga misy ny vola na CFD. Noho izany, zava-dehibe ny andramo ny lanjan'ny paipa iray alohan'ny hanokafana varotra amin'ny fitaovana manokana.
Ankehitriny dia tokony ho fantatrao ny valin'ny fanontaniana hoe "inona ny fantsona amin'ny varotra forex?". Ny fahafantarana ny taram-pandrefesana ny fanovana ny fifanakalozana fifanakalozana dia dingana ilaina mankany amin'ny mpivarotra matihanina. Amin'ny maha mpivarotra anao, tsy maintsy ho fantatrao hoe ahoana ny ny lanjan'ny pips dia kajy. Afaka manampy anao hahatsapa ny mety hiseho mety hitranga amin'ny varotra izany. Noho izany, manantena izahay fa io toro-lalana io dia nanome anao ny fahalalana fototra hanombohana ny varotrao.
Lahatsoratra mifandraika Ahoana ny fomba famakiana tabilao Forex Inona no miparitaka amin'ny Forex Trading? Mianara dingana ara-barotra Forex